မြန်မာ့ မုနုဿမုဆုိုးများ ~ Shannilay
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ခေတ်အဆက်ဆက်၌ မနုဿမိုဆိုးများ ပေါ်လါခဲ့သည် လူသိအမျုာဆုံးနှင့် ကမ္ဘာ့ကြော်ကြားဆုံး မုဆိုးမှာ ဒုတိယ-ကမ္ဘာစစ်အတွင်းက ဂျမဏီနိုင်ငံမှ အဒေါ့ဟစ်တလာ ပင်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မုနုဿမုဆိုး အတော်များများသည် မိမိလူမျိုးနှင့် မိမိနိုင်ငံအတွက် အခြားလူမျိုး အခြားနိုင်ငံအားပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယနေ့မြန်မာ့ မနုဿ မုဆိုးများသည် မိမိ မိသားစု မိမိအသိုင်းဝန်း ကောင်းစားဖို့ အတွက် မိမိနိုင်ငံ မိမိလူမျိုးကိုသာ ပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်သည်။
ကျားပေါက်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသည် ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၄ ရ က်တွင် ဂရိဗြိတိန်နိုင်ငံမှ ( အင်္ဂလိပ်လို "Burma" အဖြစ်နှင့်) ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်အဖြစ် လွတ်လပ်ရေးကို ရရှိခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ် သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အဖြစ် ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်တွင်လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်အဖြစ် ၁၉၈၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်တွင်လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်အဖြစ် ၁၉၈၉ ခုနှစ် ဇွန် ၁၈ ရက်တွင် လည်းကောင်း အမည်များ မျိုးမျိုးကုို ပြောင်းလဲခဲ့ပါသောလည်း စစ်ရိပ်စစ်သွေးနဲ့ စစ်စော်နံနေသော သူများပင်ဖြစ်သည်။
ဦးနေ၀င်းသည် ၁၉၁၀ ဇူလိုင် ၆ ရက် ပြည်မြို့ အနီးပေါက်ခေါင်း ကျေးရွာ၌ ဦးဖိုးခနှင့် ဟတ်ကာ အနွယ် တရုတ်မခြေသေး ဒေါ်မိလေးမှ မထင်မရှား မွေးဖွားခဲ့သူ၊ သာမန် ကျေးတောသား တယောက်ဖြစ်သည်။ ၎င်း တောသားလေးသည် နောင်သောခါတွင် ဗမာပြည်ကို (၂၆) နှစ်လုံးလုံး ပြားပြားဝပ်အောင် အုပ်ချုပ် မင်းလုပ်မည့် မင်းလောင်း ဖြစ်မည်ဟု မည်သူကမျှ ထင်မြင်ခဲ့ကြမည် မဟုတ်ချေ။ ငယ်နာမည် ရှုမောင်ဖြစ်ပြီး တက္ကသိုလ် ဥပစာတန်းအထိ ပညာဆည်းပူးခဲ့ရပြီး ၁၉၃၁ ဘ၀ကံပေး မကောင်းရှာ၍ ကျောင်းမှထွက်ရခါ မီးရထား စာတိုက်တွင် (၆) လခန့် ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး ထို့နောက် စာတိုက်နှင့်ကြေးနန်း ဌာနတွင် (၂)နှစ်ခန့် ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ ကျောင်းသားဘ၀ ကိုမမေ့နိုင်ရှာပဲ တသသဖြစ်နေခဲ့ရမှ ကျောင်းတက်ချင်လွန်သော စိတ်ခစံစားမှုဖြစ်ခါ နောင်တွင်မိမိထက် သာလွန်သော တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများကို အငြိုကြီးထား၍ မည်သို့မည်ပုံ နှိပ်ကွတ်ရမည်ကို အမြဲ ကြံဆနေသူဖြစ်သည်။
ရဲဘော်သုံးကျိပ် စတင်ဖွဲ့စည်းချိန်တွင် ကိုရှုမောင်ခမျာ မပါဝင်ခဲ့ပါ သခင်အောင်ဆန်းတို့ စစ်ပညာ သင်ကြားရန် တရုတ်ပြည်သို့ တိတ်တဆိတ် ထွက်ခွါဘို့ပြင်ဆင်နေချိန်တွင် အဖွဲ့တဦးအပြင်းဖျား ပါတော့သည်။ ထို့ကြောင့် သဘောင်္ဆိပ်တွင် လိုက်ပါပို့ဆောင် နှုတ်ဆက်သော မိတ်ဆွေအပေါင်းသင်း များထဲမှ အရပ်မြင့်မြင့် ဥပတိရုပ်ကောင်းသော ရှုမောင်အား မိမိတို့အဖွဲ့ဝင်တဦး နာမကျန်းဖြစ်ပြီး မလိုက်နိုင်တော့၍ လိုက်ပါရန် ကောက်ခါငင်ခါ ခေါ်ဆောင် သွားလိုက်ရာမှ ဆိုင်ကော်၍ချုံပေါ်တို့ ရှုမောင် ရောက်ရှိလာ ပါတော့သည်။
၁၉၅၆- ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ (၁) ဗိုလ်မှူးကြီး ရာထူးအဖြစ် တိုးမြင့်ခြင်းခံရသည်။ ခေတ်သစ် မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်းတွင် တွင်ကျန်ရစ်ခဲ့သော ၁၉၅၈- ခုနှစ် အောက်တိုဘာ (၁၈) တွင် ပထမအာဏာသိမ်းခြင်း၊ အိမ်စောင့်အစိုးရ တကယ်တော့ အိမ်စောင့်တယ်ဆိုတာ အစိုးရအလုပ်မဟုတ်ပါ အိမ်စောင့်တယ် ဆိုတာ ခွေးတွေ ကြောင်တွေ အလုပ်ပါ၊ ရှုမောင်ကတော့ မိမိကိုယ်မိမိ မြန်မာ့ခေတ်သစ် ကယ်တင်ကြီးအဖြစ် ခံယူလေတော့သည်။
ဆက်လက်၍ ၁၉၆၂- ခုနှစ် မတ်လ (၂)တွင် မြန်မာတနိုင်ငံလုံးနှင့် တိုင်းရင်သားပြည် တရပ်လုံးတို့အား အရှင်လတ်လတ် ငရဲခန်းပမာ မီးလောင်တိုက်သွင်းခြင်းခံရ ပါလေတော့သည်။ ကိုရှုမောင် ခေါ် ဗိုလ်နေ၀င်းကတော့ ဒုတိယံမိ မြန်မာ့ခေတ်သစ် ကယ်တင်ကြီးအဖြစ် ခံယူလေတော့သည်။ ယင်းနောက် မြန်မာ့နည်းမြန်မာ့အကြံဖန်နှင့် ရှစ်ဆယ်လိုတဲ့.. ဆိုရှယ်လစ် ခေါ် ရုရှားတရုတ်ဖက်စပ်လုပ် စက်ဆုတ်ကြီးကို မြန်မာပြည်တို့ တင်သွင်းလေတော့သည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေ၀င်းသည် တရားဝင်ပွဲတက်မယား (၄)ယောက်တိတိ ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ (၁)ဒေါ်တင်တင်၊ (၂) ဒေါ်ခင်မေသန်း၊ (၃) ဒေါ်နီနီမြင့်၊ (၄)ဒေါ်ရတနာနတ်မယ်- တို့ဖြစ်သည်။ ဒေါ်တင်တင်မြင့်နှင့် သားသုံး ယောက် ထွန်းခဲ့သည ဦးကျော်သိန်း (MOC officer ယခုကွယ်လွန်)၊ ဦးငွေစိုးနှင့် ဦးအေးအောင်ဝင်း တို့ဖြစ်သည်။ ဒေါ်ခင်မေသန်းသည်လည်း ပထမအိမ်ထောင်ဖြစ်သည့် ဆရာဝန် ဦးတောင်ကြီးနှင့် အမွှာပူးအပါဝင် သမီးသုံး ယောက် ထွန်းကားခဲ့သည်။
တဖန် ဦးနေ၀င်းနှင့် ဒေါ်ခင်မေသန်းတို့က နောက်ထပ်သားသမီး သုံးယောက် ထွန်းကားခဲ့ကြပြန်သည်၊ စန္ဒာဝင်း၊ ဖြိုးေ၀၀င်၊ ကြေးမူံဝင်း တို့ဖြစ်သည်။ ဦးနေ၀င်း၏ မယားများထဲတွင် ဒေါ်ခင်မေသန်းသည် ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါအားဖြင့် အလွန် အရုပ်ဆိုးသောလည်း အသားအရေမှာ ဖြူဖွေးနုအိလှပြီးဆင်ဆွယ်ပမာ ချောမွတ်ခြင်းရှိပေရာ သူမ၏ အသားအရေကိုတို့ ထိမိရုံမျှနှင့်ပင် သာမာန်ယောကျာ်း တယောက်အဘို့ အရည်ပျော်ကျသွားနိုင်လောက်၏ ထို့ကြောင့် သူမအား အတွေ့မိဖုရား (သို့မဟုတ်) ခေတ်သစ်ပဉ္စပါပီ ဟုခေါ်ဆိုအသိမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။ ရန်ကုန်မြို့ရှိသံတမန် အသိုင်းအ၀ိုင်း ( Diplomatic circle ) ကမှုသူမအား အတွေ့ (The torch ) ဟုခေါ်စမှတ် ပြုခဲ့ကြသည်။ ဒေါ်ခင်မေသန်းကွယ်လွန်ပြီးနောက် ဒေါ်နီနီမြင့်လက်ထပ်ပေါင်းသင်းခဲ့ပြန်သည်။
နောက်ပုိုင်းမှ ရတနာနတ်မယ်ကိုတွေ့ကာ ဒေါ်နီနီမြင့်ကိုယူတာ ယတြာအလိုရဟုဆိုကာ ဒေါ်ဒေါ်နီနီမြင့်ကို ကွာပြီး ရတနာနတ်မယ်ယူပြန်သည်။
ရတနာနတ်မယ်သည် ဦးနေဝင်း၏ တတိယ အိမ်ထောင်ဘက် ဖြစ်သည်။ ရတနာနတ်မယ်သည် သြစတြေလျား နိုင်ငံသား ပြင်ဦးလွင်၊ မြင်းပြိုင်ကွင်း မြင်းဒိုင်ချုပ် Mr. Herbert Bellamy နှင့် လင်းပင်ထိပ်တင်မလတ်၏ သမီးဖြစ်သည်။ ၁၉၃၁-ခုနှစ်တွင် ရတနာနတ်မယ်ကို မွေးဖွားခဲ့၍ အဖိုးအဖွား ဖြစ်သော လင်းပင်မင်းသားကြီးနှင့် ရေနံသာ ခင်ခင်ကြီးတို့က အသက်ကြီးမှ ကလေးရသောကြောင့် နတ်ကပေးသော ကလေးဟုဆိုကာ လင်းပင် ထိပ်တင်မလတ်၏ သမီးကို “ရတနာနတ်မယ် ” ဟု အမည်ပေးခဲ့သည်။
ရတနာနတ်မယ်သည် မင်းမျိုးမင်းနွယ်ဖြစ်သည့် အပြင် ရုပ်ရည်ချောမောပြီး မြန်မာဆန် ပြုမှု နေထိုင်သူ ဖြစ်သဖြင့် ဗိုလ်နေ၀င်း သည်လည်း တောင်ရှည်ပုဆိုးကြီး တ၀တ်ဝတ်နှင့် ရတနာနတ်မယ်ဆီသို့ လည်ပတ်ကြောင်းသိရသည်။ ဦးနေ၀င်းနှင့် ရတနာနတ်မယ်တို့ တရုတ်ပြည်ခရီးသွားရာ ရတနာနတ်မယ်မှာ စီအိုင်အေက ပေးလိုက်သော ကင်မရာ ကြယ်သီးပါ၍ဟုဆိုပြီး ပြဿနာတက်၍ ရတနာနတ်မယ်ကိုကွာ၍ တဖန်ဒေါ်နီနီမြင်ကိုပြန်ယူပြန်သည်။
ဒေါ်နီနီမြင့်မှာ ဘ၀ပေးကုသိုလ်အရေ ဦးနေ၀င်း၏ နှစ်ကျော့ပြန် နှစ်ပြန်ကြော် မယားဖြစ်ခဲ့ရရှာလေသည်။ (နှစ်ပြန်ကြော်ထိုးဖူးကား ကျွတ်၏ ၊ ရွ၏ ၊ ဆိမ့်၏ ၊စား၍ အလွန်ပင် ခံတွင်းတွေ့လေသည်) ထို့အပြင် မြန်မာ့နိုင်ငံကျော် အဆိုတော်မင်းသမီး နာမည်မဖေါ်တော့ပါ ၎င်း၏ မိခင်နှင့် အဒေါ်နှစ်ကိုယ်ပါ ယူပါမည်ဟုဆိုကာ ဖခင်ဖြစ်သူမှ သုံးယောက်တော့ မလုပ်ပေးပါနဲ့ နှစ်ယောက်ပဲ လက်ခံပေးပါဆို၍ တောင်းပန်ရလေ တော့သည်၊
သို့ဖြစ်၍ ပြည်ဗမာနှင့် ဗိုလ်ချုပ်ရွာတွင် အလွန်ရေပန်းစားသည့် အင်္ဂလိပ် စကားပုံတခုပေါ် ပေါက်ခဲ့ပါသည်။ You three, I three , We three. ဟူသတည်း။
စ၀်ယဉ်အော် သို့မဟုတ် စ၀်စိုင်း ပြည်ဗမာနှင့် ဗိုလ်ချုပ်ရွာ
ထုတ်နုတ်- ကျောငြိမ်း ရဲဘော်သုံးကျိမ်နှင့် အခြားစာစောင်များ
ဦးစိန်လွင် - စိန်လွင် ခြောက်တန်း တဇောက်ကန်း ဆောက်ရန်းမလုပ်နဲ့၊ ဘဲဥတစ်လုံး နှစ်ကျပ်ခွဲ စိန်လွင်ခေါင်းကိုခွဲ၊ ဆန်တပြည် ဆယ့်ခြောက်ကျပ် စိန်လွင်ခေါင်းကိုဖြတ် ဟု ၁၉၈၈ ခုနှစ်က ပြည်သူလူထု၏ လှောင်ပြောင်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသောသူသည် ဆန္ဒပြည်သူများ အား သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ် လူစုခွဲရန် ခြေမြန်တပ်မ (၂၂) မှ စစ်သားများကို စေလွတ်ခဲ့သည်။
ဆန္ဒပြည်နေသူ လူအုပ်ကြီး များထဲသို့ စစ်တပ်က လက်လွတ်စပယ် ပစ်ခတ်ခဲ့မှုကြောင့် လူ သုံးထောင် (၃,၀၀၀) ထက်မနည်း သေကြေခဲ့ရသည်။ ထိုသို့ ရှစ်လေးလုံး ပြည်သူ့ အရေးတော်ပုံ အတွင်း သူ၏ ပြည်သူလူထု အပေါ် လူမဆန်စွာ ရမ်းကား သတ်ဖြတ်မှုများကြောင့် "ရန်ကုန်မှ သားသတ်သမား" ဟု ကမ္ဘာက အမည် ပေးခဲ့ရသည်။ သို့သော်လည်း ပြည်သူလူထု၏ ဒီရေအလား ဆန့်ကျင် အုံ့ကမှုများကြောင့် စိန်လွင်သည် ၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် တာဝန် အားလုံးမှ နုတ်ထွက် ပေးခဲ့ရသည်။
မြန်မာပြည်သမိုင်းတွင် ကုန်းဘောင်ခေတ် ဖောင်းကားစားမောင်မောင် (၇) ရက်သာနန်းတက်ခဲ့ရသလို မဆလခေတ်မှာ စိန်လွင်ခြောက်တန်း တဇောက်ကန်းဟာ (၁၈) ရက်သာခံခဲ့သော သမ္မတ တစ်ဦးဖြစ်သည့်အပြင် သူ့လက်ထပ်တွင် လက်နက်မဲ့ဆန္ဒပြသူများကို ပစ်သတ်ရန် စစ်တပ်ကို အမိန့်ပေးခဲ့သူဖြစ်သည်။ အရှင်ဖမ်းမိသော တိုင်းရင်းသားကရင်ခေါင်းဆောင် စောဘဦးကြီးကို ပစ်သက်ခဲ့သူဟု စွပ်စွဲခံရသောသူသည် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားသမဂ္ဂကို ဖြိုဖျက်ရာတွင် လက်တွေ့ပါဝင်ခဲ့သောသူဖြစ်သည်အပြင် ၇၅ကျပ်၊ ၃၅ကျပ်၊ ၂၅ကျပ်တန်ငွေစက္ကူများကိုလည်း တရားမ၀င်ငွေစက္ကူအဖြစ် နာမည်ခံ ကြေငြာခဲ့သူဖြစ်သည်။
၂၀၀၂ ခုနှစ်၊ မတ်လတတွင် သူ့ဆရာသခင် အိမ်အကျယ်ချုပ်သဖြယ် ခံရပြီးနောက် မကြာမီပင် သူလည်း တရားမဝင် ရရှိနေသော ခံစားခွင့်များ၊ သြဇာ အာဏာများ ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး မဖြစ်စလောက်သော စစ်တပ် ပင်စင် လစာလေးဖြင့် ဆင်းရဲပင်ပမ်းစွာ ရှင်သန် နေခဲ့ရသည်။ သူ၏ အစာအိမ်ရောဂါ အတွက် စင်ကာပူတွင် ကုသမှုခံယူပြီး အပြန် ၂၀၀၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၉ ရက်နေ့ အသက် ၈၁ နှစ် အရွယ်တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ သေဆုံးသည်။
ဒေါက်တာမောင်မောင် -(1925-1994) ဒေၝက်တာမောင်မောင်ကို ၁၉၂၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝၝရီလ ၃၁ ရက်နေႛတ အဖ အထက်တန်း ရှေ့နေ ဦးဆင့်၊ အမိ ဒေၞအေးတင်တိုႛက မန္တလေးမြို့၌ ဖွားမြင်သည်။ မွေးခြင်း ခုနှစ်ယောက် ရှိသည့်အနက် တတိယမြောက် တဦးတည်သောသား ဖြစ်သည်။
ဒေၝက်တာ မောင်မောင်သည် ၁၉၄၉ ခုနှစ်မှ ၁၉၅၃ ခုနှစ် အထိ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ လန်ဒန် မြို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေး၊ ပြန်ကြားရေး ပညာများကို လေ့လာ ဆည်းပူးသည်။ ဟော်လန်နိုင်ငံရှိ Academy of International Law မှ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ဒီပလိုမာ ရရှသည်။ ၁၉၅၂ ခုနှစ်တွင် လန်ဒန် မြို့ LINCON’S Inn မှ Barrister-at-Law ဝတ်လုံ အဖြစ် ခံယူသည်။ ၁၉၅၆ ခုနှစ်တွင် ဟော်လန်နိုင်ငံ UTRECHT တက္ကသိုလ်မှ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ဥပဒေဘာသာရပ်ဖြင့် ဥပဒေပၝရဂူ L.L.D. (Doctor of Law) ဘွဲႚရရှိသည်။
ဒေၝက်တာ မောင်မောင်သည် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေဝင်း အိမ်စောင့် အစိုးရ လက်ထက် ၁၉၅၉ ခုနှစ်တွင် လက်ထောက် ရှေ့နေချုပ်၊ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ဥပဒေ ကထိက တာဝန်များ ထမ်းဆောင်သည်။ ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်မှ ၁၉၆၂ ခုနှစ် အထိ အမေရိကန်နိုင်ငံ YALE တက္ကသိုလ်၌ ကထိက အဖြစ် စာပေပိုႛချကျမ်းပြုကာ ၁၉၆၁ ခုနှစ်တွင် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ဥပဒေဘာသာရပ် အတွက် ဒေၝက်တာဘွဲႚကို ရရှိခဲ့သည်။
နဖူးပြောင်ပြောင် ဦးမောင်မောင် အရူးထောင်ကို ပို့လိုက်ကြဟု လူထု၏ လှောင်ပြောင်ခံခဲ့ရသောသူ အာဏာရှင် ဦးနေဝင်း အပေါ် မည်သည့် ခြိမ်းခြောက်မှုမျိုး မဖြစ်စေခဲ့သူ ဒေါက်တာ မောင်မောင်သည့် အာဏာရှင်ကြီး၏ သြရသ ဖြစ်၍ '၎င်းဖခင်ကြီး၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိဖြစ်သော မြန်မာပြည်နှင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေဝင်း' (Burma and General Ne Win) စာအုပ်ကို ရေးသားခဲ့သူ ဥပဒေပညာရှင် စာရေးဆရာ တဦးဖြစ်သည်။
ပြည်သူလူထုတို့အား မည်သို့ ဖမ်းဆီးချုပ်နောင်ရမည် ဥပဒေ-ပုဒ်မ သတ်မှတ် ပေးသူ ဖြစ်၍ ထောင်ချမောင်မောင် ဟုလည်းခေါ်သည် မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းတွင် ရက်အနည်းသာ ခံသည့် ခေါင်းဆောင်များထဲတွင် အပါအ၀င်ဖြစ်သည်။ ဗိုနေ၀င်း၏ (မဆလ) တပါတီ အာဏာရှင်ခေတ်တွင် အားအထားရဆုံး တိုင်းပြည်လိမ်ပညာရှင်၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင် ဦးစီးခေါင်းဆောင်သည့် အစိုးသစ်အတွက်- နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့- State Law and Order Restoration Council လမ်းစဉ်သစ်ကို ရွေးချယ်ချမှတ်ပေးခဲ့သူဖြစ်သည်။
ဒေၝက်တာမောင်မောင်သည် မဆလ ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင် အဖြစ် လည်းကောင်း၊ ပြည်သူႛလွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတော် ကောင်စီဝင် အဖြစ် လည်းကောင်း မဆလ သက်တမ်းတလျှောက် တာဝန် ထမ်းဆေင်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင် ဥပဒေ ကော်မရှင် ဥက္ကဌ ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် ပြည်သူ ဥပဒေ အကျိုးဆောင် အဖွဲ့ဥက္ကဌ မှသည်နိုင်ငံတော်ကောင်စီ ဥက္ကဌနှင့် သမ္မတ အဖြစ်ပၝ တာဝန် ယူခဲ့ဖူးသူ ဖြစ်သည်။
ဒေါက်တာမောင်မောင်သည် ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်နေ့တွင် ဟင်္သဿာတမြို့နေ ပါလီမန်အမတ် ဦးသန်းတင်၊ ဒေါ်ကျင်မြတင်၏ သမီး ဒေါ်ခင်မြင့်နှင့် လက်ထပ်ခဲ့သည်။ သားသမီး ခုနှစ်ဦး ထွန်းကားခဲ့သည်။ ၁၉၉၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂ ရက်နေ့၌ ရန်ကုန်မြိတွင် ကွယ်လွန်သည်။ ကွယ်လွန်ချိန်တွင် ဇနီးဒေါ်ခင်မြင့်နှင့် သားသုံးဦး၊ သမီးလေးဦး၊ မြေး ၁၀ ဦးကျန်ရစ်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစောမောင် ဂျိုကုပ်ဒူးကြီး ကြောပြောင် ဟု၎င်းကို လောက်ပြောင်ခြင်း ခံခဲ့ရသူ ခေတ်သစ် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒုတိယ- အကြိမ်မြောက် စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကို ခေါင်းဆောင်ခဲ့သော သူသည် စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့တွင် တိုင်းပြည် ချောက်ထဲ ကျတော့မည်ဟု အကြောင်းပြကာ ကယ်တင်ရှင်ကြီး တရောင်ရောင်လုပ်ခါ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေသော ရဟန်းရှင်လူပြည်သူလူထုကြီးနှင့် သပိတ်စခန်းများကို နိုင်ငံတ၀မ်းလုံးအနှံ့ ပစ်ခက်ကာ ဖြိုခွင်းစစ်ဘိနပ်နဲ့ နှင့်းခိုင်းခဲ့သူဖြစ်သည်။ မိမိကိုယ်မိမိ မြန်မာ့ခေတ်သစ် ကယ်တင်ကြီးအဖြစ် ခံယူလေတော့သည်။ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်တွင် လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှသော ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပေးခဲ့သူ အနိုင်ရသောပါတီကို အာဏာလွဲပေးကာ စစ်တန်းလျားပြန်မည်ဟု ပြောခဲ့သောသူဖြစ်၍ မိမိတစ်ယောက်တည်းသာ စစ်တန်းလျားပြန်သို့ ပြန်သွားခဲ့ရပြီး တပ်များကိုခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ခြင်းမရှိသူဖြစ်သည်။ မိမိတို့တပ်မတော်မှ အာဏာခေတ္တရယူထားချိန် ငွေစက္ကူများသိမ်းဆည်းခြင်း မပြုလုပ်ပါဟုပြောခဲ့၍ ယနေ့တိုင်၎င်းညီတော်၏များသည် အသစ်တွေသာ ဆက်လက်ထုတ်နေပါ တော့သည်။
ရှုးကြီးတဲ့ မှူးကြီးသန်းရွှေ- ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေသည် ၁၉၃၃-ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂-ရက်၊ မန္တလေးတိုင်း၊ ကျောက်ဆည်မြို့နယ် အတွင်းရှိ မြင်းစုကျေးရွာတွင် မွေးဖွားသည်။ စာတိုက်ဌာနတွင် အလုပ် စတင်ခဲ့၍ အသက် ၂ဝ တွင် တပ်မတော်ထဲသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး နှစ်အတန်ကြာ စိတ်ဓာတ် စစ်ဆင်ရေးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်း ဆောင်ခဲ့သည်။ ဘုရင်အဟုတ်ထင်ပြီး ရှုးနေသူ ၎င်းသည်လည်း နောင်တော်ကြီး ဂျိုကုပ်ဒူးကြီး ကြောပြောင်အား တောဂျောင်တို့ ပို့ကာ ၁၉၉၂-ခုနှစ်၊ ဧပြီ ၂၃ ရက်တွင် ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ဘွဲ့ခံယူကါ ကယ်တင် ပါရစေခင်ဗျာဟုဆို၍ နားဝင်တိမ်သော (န၀တ)အဖြစ်မှ နေ၀င်အောင်ဖင်ဖြဲမည် ဆိုသော(နအဖ) အဖြစ်သို့ပြောင်ခဲ့ပြီး။ ၎င်းတို့၏ ဖခင်ကြီး ရှုမောင်ကို ညုတယောင်ယောင်ပြုကာ မသေမခြင်း သားရေကွင်းဖြင့် ပစ်သတ်ခဲ့သူ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နေ့ထူးနေ့မြတ်များအား ကျင်းပခြင်းမရှိပဲ ပိတ်ပင်ခဲ့၍ ဒဂုံ ဥက္ကာလာပ မင်းကြီးမှ အမျက်တော်ရှ၍ စောင့်ကန်လိုက်ရာ ဒဂုံတွင် မနေရဲတော့ပဲ တောင်ငူကြတ်ပြေး ဇရပ်ဘေးမှာ နေပြည်တော်ဟု အိမ်သစ်ဆောက် ခါနေထိုင်လေသည်။
မြန်မာ့သမိုင်းတွင် မည်သည့်အခါမှ မရှိဘူးမဖြစ်ဘူးသော သဘာဝဘေး၊ စစ်ဘေး၊ အငတ်ဘေး တို့ကို တိုင်းသူပြည်သားများ မည်သို့မျှ ခံနိုင်စွမ်း မရှိတော့၍ တိုင်းတပါး ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင် ခိုလုံမှု အများဆုံး ခေတ်ဖြစ်သည်၊ သို့ပေမဲ့ ၎င်း၏ အ၀ယ်သမက် စိတ်မကွက်အောင် ချစ်သမီးအား စိန်ခက်များ စီရီကာ မင်္ဂလါပွဲဆင်နွဲပေးသောဖခင်၊ ထိုဖခင်ကြီး၏ မိခင်ကြီးဖြစ်သော မာမီမားသား ဒေါ်ခင်သန်း(ခေါ်) Kitty Ba Than မှဖခင်ကြီး ဒယ်ဒီဖားသားဖေဖေ ရှုမောင်ကို အမြဲဆုံးမလေ့ရှိသော ဗမာပြည်ကို ကောင်းမွန်စွာ အုပ်စိုးသွားနိုင်ရန် သားတော်သုံးပါကို ထိန်းချုပ်နိုင်မှရမည်၊ ဆိုသော အဆိုအမိန့်ကို လက်ခံကျင့်သုံးသော သားတယောက်အဖြစ် ထင်ရှားလေသည်။
(၁) ပထမသားတော် - စစ်သား (စစ်တပ်အမွေဆက်ခံမည့် သားကြီးသြရသ)
ထို့နည်းတူ ၎င်း၏ဖခင် ရှုမောင်သည် တတိယသားတော်- အထွေးဆုံး ကျောင်းသားများကို ရက်ရက်ဆက်ဆက် သတ်ဖြတ်နှိမ်နှင်းခဲ့သည်။ ထိုအဖြစ်ကိုအားကြ၍ ဘုရင်ရူး ရူးနေသော သားတော်မောင် ရှုးကြောင်ကြောင် အမောင်သန်းရွှေသည် ငါသာလျှင် အမြင့်မြတ်ဆုံး အရှင်သခင်ဟုဆိုကာ ၂၀၀၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာတွင် ဒုတိယသားတော် ဖြစ်သော ဘုရားသား (သံဃ)တော်များမှ မေတ္တာပို့လမ်းလျှောက်သည်ကို ကမ္ဘာတုန်အောင် ရိုက်နက်နှိမ်နှင်း စစ်ခင်းခဲ့သောသူဖြစ်သည်။
မှုးကြီးသန်းရွှေ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ရှိတဲ့ မဂ္ဂဇင်း တခုက ကောက်ယူတဲ့ ကမ္ဘာ့အဆိုးဝါးဆုံး အာဏာရှင် နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင် ၁၀ ယောက် စာရင်းမှာ စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေလည်း ထိပ်တန်းနေရာမှာ ဆက်ရှိနေပါတယ်။
လွန်ခဲ့သည့် နှစ်အနည်းငယ်က ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေကို ဆေးစစ်ခွင့် ရခဲ့သည့် စင်္ကာပူဆရာဝန်များ၏ ရောဂါဖော်ချက်ကို သိရ မည်ဆိုပါက အမှန်တကယ် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ အတည်မပြုနိုင်သော သတင်းများအရ တုနှိုင်းမရှိ ခေါင်းဆောင် ကြီးတွင် ကင်ဆာနှင့် သွေးတိုးရောဂါ ခံစားနေရသည်ဟု ဆိုကြပါသည်။ စင်္ကာပူဆရာဝန်များ ထုတ်ဖော်ပြောရန် မ၀ံ့ဖြစ်နေရသည့် ကိစ္စမှာ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေအနေနှင့် ရူးသွပ်နေသည်ဟူသည့် အချက်ပင် ဖြစ်ပါတော့သည်။
မြန်မာ့ခေတ်သစ် အာဏာရှင်လောင်းကျော် များအား သားကြီးမှဖေကိုသတ်မည်လော အဖေမှသားကြီးကို သတ်မည်လော မည်သူမှ မည်သူ့ကို သတ်ကြမည်လော သို့လော သို့လော နှင့် လေါင်ကျွမ်းနေဆဲ ပြည်တွင်းစစ် မီး သည်လည်း လေါင်မြဲ လေါင်စဲ လေါင်နေစဲပါ။
ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် - နောင်တော်ကြီးများလောက် အာဏာမရှိပေမဲ့ တ၀က်တပျက် အာဏာ စူးရှသူ ဂျိုကုပ်ဖင်တွန့် တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်လို ခေါ်ပါသည်။ ၈၈ အရေးတော်ပုံနှင့် အတူ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို ဗိုလ်နေ၀င်း သမီးကြီး ဒေါ်စန္ဒာဝင်းနှင့် နိုင်ငံရေးဇတ်စဉ်ပေါ်မှ ကြည့်၍ ကပြသူရော ကြည့်ရှုသူများ ကိုပါ မြင်နေကြရသူနှစ်ဦး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွန့်ကို ၁၉၃၉- ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်း၊ သံလျင်မြို့၊ ဗိုလ်ချုပ်ရွာတွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ တရုပ်နွယ်ဖွား တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရရှိပြီးနောက် ပေါင်းတည်မြို့တွင် အခြေခံပညာ ကျောင်းဆရာတစ်ဦးအဖြစ် အမှုထမ်းနေစဉ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်းက လာရောက် လည်ပတ်ရာတွင် တွေ့ရှိ သဘောကျသွားသဖြင့် အနားသို့ခေါ်ကာ ထားရှိ ရာမှ မမျှော်လင့်ဘဲ တပ်မတော်အတွင်းသို့ ရောက်ရှိသွားခဲ့သည်။ ရာထူးအလွန် အတက်မြန်သဖြင့် အများကပင် အံ့အားသင့်ခဲ့ရသည်။ ဦးနေ၀င်း၏ သမီးဖြစ်သူ ဒေါ်စန္ဒာဝင်းနှင့် မောင်နှမ သဖွယ် အလွန်ရင်းနှီးသည့် ဆက်ဆံ့ရေးမျိုး ရှိခဲ့ကြသည်။ (မကြီး၊ မမ ဟုပင် ရင်းနှီးစွာခေါ်ဝေါ်သည်ဟု ကြားဖူးသူတို့က ဆိုကြသည်။)
၁၉၈၈ အရေးအခင်းနောက် ၁၈-၁၀-၁၉၈၈ တွင် နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ (န-၀-တ) ပေါ်ထွန်းလာသောအခါ န-၀-တ အဖွဲ့၏ အတွင်းရေးမှူး(၁) အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ တွင် နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၎င်းသည် နာဝင်တိမ်သော န၀တ လက်ထက် အထွေအတွင်းရေးမှုး (၁) ဘ၀ဖြင့် နာမည်အမျိုးမျိုးကြော်ကြားသူ ရောက်လေရာနေရာမှာ ကလေး သူငယ်များ ကောက်ယူ ချီပွေ့လွန်းလုိ့ (ကောက်ချီပွေ့)၊ နောက် မှုးယစ်ရာဇာများနှင့် ဆက်နွယ်၍ (ဖိုးခင်ညွန့် ) ဟု၎င်း နာမည်ကြော်ကြားလေသည်။ ၂၀၀၄ ခု အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်တွင် အဂတိ လိုက်စားမှု အကြောင်းပြချက်ဖြင့် အစိုးရအဖွဲ့မှ ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ ရပြီး ရုံးတင်တရားစွဲဆို ခံရကာ ဆိုင်းငံ့ ပြစ်ဒဏ်ဖြင့် နေအိမ်၌ အကျယ်ချုပ်၄၄နှစ် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်း ခံရလေသည်။
အလျဉ်းသင့်လျှင် ဆက်လက်ဖေါ်ပြ ပါဦးမည်--